Filoha teo aloha ny FMT, Ramiandrisoa Serge: « Tsy handeha amin’ny laoniny ny eto raha manjaka ny tsimatimanota… » | NewsMada
Filoha teo aloha ny FMT, Ramiandrisoa Serge: « Tsy handeha amin’ny laoniny ny eto raha manjaka ny tsimatimanota… »
Nivahiny tao amin’ny radio Alliance 92 FM, amin’ny alalan’ny fandaharana “Ambarao”, ny filoha teo aloha ny Federasionin’ny tenisy (FMT), Ramiandrisoa Serge. Ankoatra ny resaka fanatanjahantena, nitondrany ny heviny koa ny fomba fitantanana eto amin’ny firenena.
Notsiahiviny fa nialoha ny “Lalao olympika” ny taona 2004, nisy resaka maloto tamin’ny hala-bato ka tsy nahazoan’ny mpitantana ao amin’ny Komity iraisam-pirenena olympika (CIO) mitondra fanatanjahantena intsony mandra-pahafaty. “Ho sahy hanao ny tahaka izany sy haka fanapahan-kevitra ve ny eto amintsika raha tratra amin’ny tsy mety nataony ny tompon’andraikitra. Aza manantena hanabe tanora sy kristianina ary olom-pirenena raha mbola manjaka ny tsimatimanota. Tsy maneho ny maha fitaratra eo amin’ny fisahanana andraikitra izany”, hoy izy. Nohitsiny fa ilaina ny finiavana politika eto amintsika ary mahasahana ny sehatra rehetra avokoa izany.
Manana traikefa ka tokony homena toeram-boninahitra
Tsy azo anantenana vokatra raha tsy mipetraka izany sy ny maha fitaratra ny mpitantana. “Ilaina ny etika: fahaiza-mitondra tena sy ny tsy fitadiavana tombontsoa manokana, saingy manelingelina ny mpitondra sy ny mpitantana izany… Maka fanapahan-kevitra ho an’ny tombontsoa manokan’ny tena ny maro amin’ireo mitana andraikitra…”, hoy ihany izy.
Momba ireo efa nitantana fanatanjahantena teo aloha kosa, nambarany fa manana traikefa izy ireny ka tokony homena toeram-boninahitra, tahaka ny hita any ivelany. “Ho mpanoro hevitra sy ho arofanina amin’ny tsy mety… Manelingelina ny sasany anefa izany ka tsy ahafahan’izy ireny manao ny tsy mety”, hoy ity mpitantana teo aloha eo anivon’ny FMT ity. Nitondrany ny heviny koa ny efa firosoana amin’ny maha matihanina ka efa hita taratra izany eo amin’ny taranja tenisy sy ny baolina kitra.
Fitantanana tsy misy mangarahara
Etsy andaniny, nohitrikitrihiny fa mifandray avokoa ny sehatra rehetra eto amin’ny firenena noho ny tsy fisian’ny mangarahara tanteraka. “Eo koa ny ady tombontsoa. Ny fijerena ny akama sy namana ary ny fianakaviana rehefa manana fahefana kely… Ny olana koa, manaiky lalaovina hatrany isika. Manampy izany, tsy misy ny tamberina andraikitra amin’ireo mpitantana: ny tatitra momba ny vola, ohatra, nefa manan-jo hitaky mangarahara momba izany ny nametraka anao amin’ny toerana iray”, hoy Ramiandrisoa Serge. Notsiahiviny fa miaina amin’ny ory hava-manana sy ny mandrora mitsilany ny eto amintsika ka tsy mahagaga raha tahaka izao ny miseho eto amin’ny firenena. “Mora ampiadiana sy tratry ny zarazarao anjakana ary lalaovina eto noho ny ataontsika ihany”, hoy ity mpitantana fanatanjahantena ity.
Namaranany ny resadresaka ny filazana fa rehefa tafiditry ny resaka politika ny fanatanjahantena, tsy antenaina ho laharam-pahamehana sy hojerena izany. “Mijery ny tombontsoa manokany izy ireo fa tsy hametraka ho ambony izany fanatanjahentana izany… Hanaiky ny tahaka izany hatrany ve isika ?”, hoy ihany izy.